Akpụkpọ ụkwụ ụlọ ọrụ - Digital Manufacturing Co., Ltd.
3D ebi akwụkwọ boosts akpụkpọ ụkwụ ụlọ ọrụ
A ogbe nke Nike akpụkpọ ụkwụ e biri ebi site SL 3D na ngwa nbipute na Shanghai center flagship ụlọ ahịa
Na-adịbeghị anya, 3D-ebi akwụkwọ technology nke nta nke nta penetrated na ubi nke shoemaking. Site kanban akpụkpọ ụkwụ Ebu ka sanding akpụkpọ ụkwụ Ebu, ka mmepụta Ebu, na ọbụna okokụre akpụkpọ ụkwụ ọbụ, o yiri ka 3D-ebi akwụkwọ technology nwere ike hụrụ n'ebe nile. Ọ bụ ezie na 3D biri ebi akpụkpọ ụkwụ na-adịghị ma na-ewu ewu na akpụkpọ ụkwụ na-echekwa, n'ihi na imewe nwere na customization, ohere nke 3D biri ebi akpụkpọ ụkwụ, ọtụtụ akpụkpọ ụkwụ Refeyim n'ụlọ na mba ọzọ ọtụtụ ugboro, mere mgbalị a abụrụ technology ubi na-adịbeghị anya.
Mee ngwangwa imewe nkwenye na-ebelata mmepe okirikiri
Ná mmalite ogbo nke akpụkpọ ụkwụ imewe, akpụkpọ ụkwụ ebu samples-na-eji ọdịnala ngwaọrụ dị ka lathes, malite ịgba ibe n'ibe, punching igwe, na ịkpụzi igwe. Mmepụta usoro bụ nnọọ na-ewe oge na ụba oge a chọrọ maka emebe na verifying akpụkpọ ụkwụ Ebu. N'ụzọ dị iche, 3D-ebi akwụkwọ nwere ike na-akpaghị aka na ngwa ngwa tọghata kọmputa akpụkpọ ụkwụ samples n'ime ụdị, nke ọ bụghị nanị merie ndị na-agaghị emeli nke omenala Filiks, kamakwa weghachiri imewe echiche ka mma, na-akwado mkpebi ngwaahịa ule na njikarịcha.
Unlimited site Ọdịdị, elu arụmọrụ na mgbanwe
Dabere na uru nke dijitalụ ngwa mmepụta, 3D-ebi akwụkwọ technology na ọ bụghị nanị site na Ọdịdị, ikwe na-emepụta ịmịpụta ha n'ike mmụọ nsọ. Ke adianade do, 3D ebi akwụkwọ mgbanwe mmemmem emepụta gbanwee aghụghọ na belata n'ihu na-akwụ ụgwọ n'ihi na ebu rework.
3D ebi akwụkwọ alows na posibility nke personalilzed customization
ọ na-atụ anya na 3D biri ebi akpụkpọ ụkwụ nwere ike ahaziri costomization maka ndị nkịtị. Na-emekarị, n'ihi na ndị na-eri Filiks, ngwaọrụ, nnyocha na mmepe, na price nke ahaziri akpụkpọ ụkwụ bụ nnọọ elu karịa nke nkịtị akpụkpọ ụkwụ. 3D-ebi akwụkwọ nwere ike belata na-eri nke Ebu, ebelata mmepe okirikiri na-enye ihe itinye n'ọrụ. N'ọdịnihu, ọ na-atụ anya izute onye mkpa nke na-eji ọkụ na mmepụta usoro mgbe n'ibelata mmepụta na-eri nke ụlọ ọrụ.
Iru ahịa ụkwụ ọmụma database
3D ebi akwụkwọ dabeere na 3D data ọmụma ịme ngosi uwe nke ndị ahịa nzọụkwụ, na mgbe na-eji 3D na ngwa nbipute na-emepụta na insole, ọbụ na akpụkpọ ụkwụ ahụ n'ụzọ zuru ezu ime ka onye ahịa ụkwụ udi, ọsọ ọsọ njikarịcha nke ngwaahịa akara, na-eweta bara uru ọbuọtde na ahaziri n'elu ikpo okwu nke akpụkpọ ụkwụ ụlọ ọrụ.
3D na-ebi akwụkwọ na-atụ aro
Ahaziri customization: 3DSL-360 & 3DSL-450
Obere ogbe mmepụta: 3DSL-600 & 3DSL-800